မင်္ဂလာဆောင်အတွက် ဘာလက်ဖွဲ့ရမှန်းမသိရင် ဒီပစ္စည်းတွေကို သတိရလိုက်ပါ… – Trend.com.mm
Posted on December 25, 2017 December 22, 2017 by Wint
သင့်သူငယ်ချင်း မင်္ဂလာဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်သူ့မင်္ဂလာမဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာလက်ဖွဲ့မှန်းမသိရင် ဒီပစ္စည်းတွေကို သတိရလိုက်ပါ။ဒီပစ္စည်းတွေမြင်တိုင်း ထူးထူးခြားခြား လက်ဖွဲ့တတ်တဲ့သင့်ကို သူတို့သတိရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုသတိရနေစေမယ့်် ထူးခြားဆန်းပြားလက်ဖွဲ့တွေက ဘာဖြစ်မလဲ.. ကြည့်ရအောင် ..။
လင်မယားတွေ ရန်ဖြစ်စရာမလိုတော့ဘူး။ တစ်ယောက်က နွေးတဲ့အခြမ်းမှာအိပ်ချင်တယ်။ တစ်ယောက်က အေးအေးလေးနဲ့အိပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအိပ်ယာခင်းလေးက နှစ်ယောက်ကြားဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုသင့်မြတ်စေမှာပါ။
အင်တာနက်မှာ တွေ့နေရတယ်..စုံတွဲတွေ အတူတူရေချိုးကြတဲ့ပုံလေးတွေ။ အားကျလို့ရှယ်နေသူတွေမှ တစ်ပုံကြီး။ ဒီရေချိုးဇလုံလေးထဲမှာ ချစ်တဲ့သူနဲ့ အတူတူရေချိုးရမယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုလဲ? ဒါမှမဟုတ် မင်္ဂလာ လက်ဖွဲ့အဖြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်ရော? သင့်ကို ထိုလင်မယားတော့ကျေးဇူးတင်နေတော့မှာနော်။ အရမ်း ရိုလို့ကောင်းလို့။ xP
အနားယူမလား ၊ စာဖတ်မလား နှစ်ယောက်အတူတူ တစ်ခုံတည်းထိုင်လို့ရမယ့်ခုံဖြစ်ပါတယ်။
Beauty and the Beast နှင်းဆီ
ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းတွေ သဘောကျတဲ့ချစ်သူတွေအတွက် အိုင်ဒီယာကောင်းတဲ့ လက်ဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုကြီးလဲ ? xD
အနေဝေးနေတဲ့ ချစ်သူတွေအတွက် အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Kissenger
ထီးသေးသေးလေး နှစ်ယောက်ဆောင်းပြီး မိုးစိုခံစရာမလိုတော့ဘူး။
နှစ်ယောက်အတူတူ အပြည့်အဝဆောင်းလို့ရတဲ့ ထီးရှိနေပြီ။
ခုလို ဆောင်းရာသီမှာ ကွတ်တိပဲပေါ့။ ချစ်သူတွေ တစ်ယောက်လက်ကို